Ilayisi elinemifino, inkukhu ne-squid | Ukupheka Kwekhishi
Ilayisi nenkukhu ne-squid
Njengoba nje kunjalo iziqu noma i croquettes, ilayisi lisivumela ukuthi sisebenzise lezo zithako ezivulekile efrijini. Endabeni yami kwakuyizindlwana ezimbili zezinkukhu kanye nendandatho ye-squid; ngazo zombili izithako ngikwenzile lokhu iresiphi yokuvuna, elula kodwa emnandi kakhulu.
Uma ku- inkukhu yendabuko irayisi Siphinde sengeza imifino ne-squid, umphumela ungathuthuka kuphela. Le rayisi eyomile, eyenziwe ngemizuzu engama-45 kuphela, iyisiphakamiso esihle ngezimpelasonto. Umndeni wonke uzoyithanda, ngiyakuqinisekisa. Kuzoba okucebile uma ukwenze ngomhluzi wenkukhu; kepha ungasebenzisa amanzi uma ungafuni ukwenza inkinga. Ngabe kufanele sifinyelele kukho?
200 g welayisi
2 inkukhu yasemuva, eqoshiwe yahlanzwa
150 g squid (noma izindandatho)
2 wezipuni utamatisi unama
500 ml. umhluzi wenkukhu
Imicu embalwa yesafron
Siqala ngokusika u-anyanisi, upelepele nogalikhi. Epanini elingaphansi sifaka uwoyela omncane futhi saute imizuzu embalwa, lokho akuthathi umbala.
Sifaka inkukhu okunongwe bese upheka kuze kube nsundu ngegolide. Bese sifaka i-squid notamatisi osuminyene, sivuselele futhi sipheke le ngxube imizuzu embalwa ukuze utamatisi unciphise ngaphambi kokufaka irayisi.
Faka irayisi nesafron bese ugovuza kahle imizuzu embalwa ngaphambi kokufaka umhluzi. Faka umhluzi, ushise, bese upheka cishe imizuzu eyi-18, uqale ngokushisa okukhulu bese uthamba.
Lapho nje irayisi seliqedile ukulipheka ake uphumule off ukushisa futhi embozwe ngendwangu imizuzu emibili ngaphezulu.
Imininingwane engaphezulu- Isipinashi, amakhowe kanye ne-ham quiche, Ama-croquette enkukhu ukusizakala ngamathanga we-consommé
I-Spanish Cuisine, Inyama Ungadliwa
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » I-Recetas del Mundo » I-Spanish Cuisine » Ilayisi nenkukhu ne-squid
Ulethisi ogcwele irayisi ngamakhowe